Difference between revisions of "Konrad Adenauer Stiftung" - Pindula
Difference between revisions of "Konrad Adenauer Stiftung"
Revision as of 09:23, 5 June 2019 (view source)
Latest revision as of 11:15, 5 June 2019 (view source)
[[File:KAS Logo Original.png|thumb|kas logo]]
'''Konrad Adenauer Stiftung''' is a German aid organisation operating in Zimbabwe. In 2017, they published the second edition of ''Climate Change in Zimbabwe: A guide for planners and decision makers'', by [[Anna Brazier]].
Latest revision as of 11:15, 5 June 2019
Konrad Adenauer Stiftung is a German aid organisation operating in Zimbabwe. In 2017, they published the second edition of Climate Change in Zimbabwe: A guide for planners and decision makers, by Anna Brazier.
26 Sandringham Drive, Alexander Park, Harare Tel: 00-263-4-744602 or 00-263-4-74533 or 00-263-772-242578 Konrad Adenauer Stiftung website
Climate Change in Zimbabwe: A guide for planners and decision makers. (Konrad Adenauer Stiftung: 2017: Harare)
Retrieved from "https://www.pindula.co.zw/index.php?title=Konrad_Adenauer_Stiftung&oldid=80487"